Wararka - Qaabka shaqada qabow ee soosaarida budada budada aluminium iyo sida loo kaydiyo
Jinka budada ah ee Aluminiumku waa nooc ka mid ah walxaha kiimikada ceyriin, kaas oo si ballaaran ay u adeegsadeen warshadaha la xiriira oo door weyn ka ciyaaray. Budada Aluminium sidoo kale waxay leedahay shuruudo gaar ah oo ku saabsan geeddi-socodkeeda inta lagu jiro habka wax soo saarka, inta badan iyadoo la adeegsanayo hababka farsamada iyo hababka shaqada qabow. Habka wax soosaarka qabow wuxuu inta badan ku tiirsan yahay aluminium qashinka si uu u soo saaro dhejiska budada aluminium, taas oo jawi ahaan u fiican oo tamar-badbaadin ah. Maqaalkani wuxuu kaala hadlayaa habka wax qaboojinta qabow si loo soo saaro koollada budada aluminium iyo kaydinta aluminiumka koollada budada ah ee la taaban karo.
One, dhibaatooyinka u baahan fiiro gaar ah ee soo saarista koollada budada ah ee aluminium ee qabowgu shaqeeyo
Arimaha soo socda waa in fiiro gaar ah loo yeesho marka la adeegsanayo tiknoolajiyadan si loo soo saaro budada aluminium iyada oo la adeegsanayo qabow aluminium duug ah.
1. Buuxin shuruudaha tayada wax soo saarka iyo tirada
Qaboojinta aluminiumka duugga ah ayaa ka dhib badan biraha caadiga ah. Sababtoo ah adkeysigeeda oo hooseysa, adkaysigeeda wanaagsan, iyo dhaq dhaqaaqa kuleylka degdegga ah, way adag tahay in la farsameeyo. Waa in laga gudbaa oo laga helaa geedi socodka qaabeynta iyo horumarinta qalabka si loo gaaro badeecada. Shuruudaha tayada iyo shuruudaha tirada.
2, badbaadi maalgashiga
Dib-u-warshadaynta aluminiumka duugga ah waa warshad macaashkeedu yar yahay laakiin dhakhso u soo noqda. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la yareeyo kharashka si loo helo faa'iido fiican. Qiimaha qalabka, kharashka wax soo saarka iyo qiimaha iibka alaabada waa in la tixgeliyaa.
3. In la yareeyo awoodda mootada ee dhammaan khadka wax soo saarka
Isticmaalka korontadu waa mid ka mid ah kharashyada soo saarida ugu muhiimsan ee budada aluminium ee ay soo saaraan aluminiumka duugga ah, oo si toos ah u saameeya tartanka suuqa ee alaabooyinka iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee shirkadaha. Sidaa darteed, ujeeddada hubinta in tayada badeecada iyo tirada looga baahan yahay la buuxiyo, habsami u socodka geeddi-socodka waa la fududeynayaa oo habka waxtarka sare leh iyo isticmaalka tamarta yar ayaa la xushay.
2. Jinka budada Aluminium, warshad budada aluminium, gaaska la taaban karo ee dhaliya budada aluminium, wakiilka dhaliya gaaska shubka ee aerated
Arrimaha u baahan fiiro gaar ah ee keydinta aluminiumka koollada ah ee la taaban karo:
1. Sheyga waa in lagu keydiyaa bakhaar qalalan, hawo leh oo qabow.
2. Waa in laga soocaa biyaha, aashitada, alkaliska, waxsoosaarka waxsoosaarka, isha kuleylka, isha dabka, iwm.
3. Badeecada waa in isla markaaba la isticmaalo ka dib, waana in lagu shaabadeeyaa waqtiga la saaray ka dib si looga fogaado isku darka waxyaabaha kale ee ka falceliya.
4. Muddada keydinta ee koollada budada aluminiumku waa 6-12 bilood.
Jinka budada aluminium ee ay soo saartay shirkadeena waxaa isticmaalay dad badan oo isticmaala si ay u soo sheegaan in tayada la isku halleyn karo. Baloogyada shubka ah ee hawada ku jira ee ay soo saaraan waxay leeyihiin daloolo isku mid ah oo xoogga isdabajoogga ah wuxuu la kulmaa heerarka qaranka. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato budada aluminium ama aad rabto inaad iibsato, waad na raaci kartaa. Si diirran u soo dhawow asxaabta ka socota dhammaan qaybaha nolosha si ay u soo booqdaan oo ay u wada shaqeeyaan una horumariyaan si wadajir ah.